ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်အလှူတွေလုပ်ပြီး သေမင်းကို လက်ခမောင်းခတ်ကာ စောင့်မျှော်နေတဲ့ အသက်တစ်ရာကျော်အဖိုး – Real Thadin
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မကြာသေးမီက ကျနော်တို့ သတင်းစာမျက်နှာကနေ အသက် ၁၂၅ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသက်ကြီးဆုံး ဖိုးဖိုး အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖတ်ရမှာပါနော်…ယခုတခါမှာလည်း အဲဒီ ဖိုးဖိုး လို အသက် ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဖိုးဖိုး ဖိုးသားဒွေးအကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ကြပါတယ်နော်..
ဖိုးဖိုး ဖိုးသာဒွေးကို ဖိုးသက်ရှည်လို့လည်း ခေါ်ကြပြီးတော့ အဖိုးဟာ စစ်တောင်း ကျောက်ညှပ်ကျေးရွာမှာ သား/သမီး မြေး မြစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရွှေပေါက်ကံ မြို့သစ်မှာ သမီးတွေနဲ့ အတူ သွားရောက်နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ဖိုးဖိုးဟာ အသကျရာကြျောနပွေီ ဖွဈပမေဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးပွီး သှကျလကျဖတျြလတျတုနျးရှိပါသေးတယျ…. နောကျပွီး သူငယျပွနျတာတှေ မရှိဘဲ ရှေးဟောငျးနှောငျးဖွဈတှကေို အမှတျရဆဲဖွဈပွီး ကောငျးကောငျး ပွနျပွောနိုငျသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ…ဂပြနျခတျေနဲ့ အင်ျဂလိပျခတျေကို မီခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒီခတျေက အကွောငျးတှကေို ကောငျးကောငျးသိသူ ပွနျပွောနိုငျသူ တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ…..ဒါ့အပွငျဖိုးဖိုးဟာ သူ့ဘဝတဈလြှောကျမှာ အလှူဒါနတှပွေုလုပျပွီး ကောငျးမှုကုသိုလျတှေ အမြားကွီး ပွုလုပျဖွတျသနျးခဲ့သူတဈဦးပါ…… ဘုရားတညျ ကြောငျးဆောကျ သိမျဆောကျနဲ့ အလှူဒါနတှမြေားစှာ ပွုလုပျခဲ့ပွီး သရေမှာကိုလညျးမကွောကျ ကောငျးမှုကုသိုလျတှေ လုပျပွီး သမေငျးကို လကျခမောငျးခတျ စောငျ့ဆိုငျးနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ…
ခုလည်းပဲ နို့ဆီဘူးခွံ ငါးသေတ္တာခွံလေးတွေနဲ့ ဘုရား ၅ ဆူတည်မယ်လို့ ရည်မှန်းချက်ထားပြီး ဘူးခွံလေးတွေ အပေါ်မှာ အရဟံ စာလုံးလေးတွေ ရေးသားပြီး စုခဲ့တာ သူ့ ဆန္ဒအတိုင်း ဘုရား ၅ ဆူတည်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေအတွက် ရရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့သာ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဖိုးဖိုးကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အိမ်အမှတ် (၁၁၁၅)၊ (၁၂) ရပ်ကွက် ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း ၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချင်တာတွေ ရှိရင်တော့ ဖုန်းနံပတ် (၀၉၇၉၀၂၅၃၇၅၁) ကို ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်…..
ဖိုးဖိုးဟာ တခါတရံ စစ်တောင်း ကျောက်ညှပ်ကျေးရွာကို သွားလေ့ရှိပြီးတော့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲခံယူတာတွေနဲ့ အလှူအတန်းလုပ်တာတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်…
“အသကျတဈရာ မနရေ အမှုတဈရာပှရေ” လို့ ဆိုရိုးစကားရှိပမေဲ့ ဖိုးဖိုး ဖိုးသာဒှေးကတော့ အသကျရာကြျောအထိ နနေရေဆဲ ဖွဈပွီး ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ အမြားကွီး ပွုလုပျနနေိုငျဆဲ ဖွဈလို့ သူမြားတှေ အရမျးအားကရြတဲ့ ဖိုးဖိုးပဲ ဖွဈပါတယျ… ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဖိုးဖိုးလို အသကျရာကြျောရှညျနိုငျကွပါစဗြော….
Source : Kyaw Bo
ရောင်းချဖို့ ပင့်ဆောင်သွားပေမယ့် လမ်းမှာတင် ဘယ်မှဆက်ပင့်သွားလို့မရတော့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ပြည်ချစ်ဘုရားကြီး